केपी ओली असफल प्रधानमन्त्री- सुरेन्द्र पाण्डे, नेता, नेपाली काँग्रेस « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डे राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत हुन् । उनले सरकारको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भइसकेको बताएका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एजेन्डाबिहीन भयो रे नि किन ?
नेपाली कांग्रेस जनताको माझमा छ । जहाँ–जहाँ उपनिर्वाचन हुँदै छ, त्यहाँ नेता, कार्यकर्ताहरु पार्टीका कुरा लिएर गएका छन् । नेपाली कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्तले पनि जनतालाई बताइरहेका छन् । हामीले बनाएको संविधानको अवस्थाका बारेमा पनि निर्वाचनको माध्यमबाट भनिरहेको अवस्था छ । यो सरकार बनेको पुगनपुग दुई वर्ष भयो । विकास निर्मांण, शान्तिसुरक्षा, संविधान कार्यान्वयन, संघीयताका बाँकी कामलगायत सबैमा पूर्णतः असफल जस्तै देखिएको छ । जताततै अनियमितता, अराजकता, भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायतका घटनाले मुलुक आक्रन्त छ । तिनै कुराहरु हामीले जनतालाई भनेका छौं । जनताको अधिकारको रक्षा र स्थापना गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नि ?
प्रमुख प्रतिपक्षले सदन चलेका बेला त्यसमार्पmत सरकारका कमीमकजोरी उठाउने हो । सदन नभएको बेलामा हाम्रा कार्यक्रमहरु गरेर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न भन्ने हो । ंतिनै माध्यमबाट हामीले सरकारलाई उसका कमजोरीका बारे भनिरहेका छौं । देशमा जे–जति घटनाहरु घटेका छन् । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना प्रतिक्रियाहरु दिइराखेको छ । हामीले सकेसम्म सरकारका कमीकमजोरीलाई सच्याउने प्रयास पनि गरेका छौं । लोकतन्त्तप्रति प्रतिबद्ध सरकारले प्रतिपक्षको आवाज छिटो सुन्छ । मुखले लोकतन्त्र भन्ने, काम र भावनामा त्यसको विश्वास नगर्ने सरकार भएकाले कतिपय हामीले भनेका कुराको सुनुवाइ भएको छैन । विगतका केही घटनाहरु पनि थिए, जुन सरकारले गर्न नचाहेको विषय जनतालाई जागरुक बनाएर त्यसको दबाबले सुन्न वाध्य बनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बढी सुल्क असुल्ने मेडिकललाई छोडिँदैन भन्दा पनि मेडिकल माफियाहरुको दादागिरी त कायमै छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले भन्ने होइन, उहाँले त गरेर देखाउने हो । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा आफ्ना युवाहरु, विद्यार्थीहरु, आफ्ना कार्यकर्ता, पत्रकारलाई बोलाएर भन्ने होइन । एक्सनमा जानुपर्छ । उहाँ त बहुमतको सरकारमा हुनुहुन्छ अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मेडिकल माफिया, भू–माफिया, ठेकेदार माफियालगायत सबैखाले माफियालाई कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो छ, म यसो गर्छु भन्ने होइन । मुखले भनेर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले त ।
केही मेडिकल कलेजलाई त उहाँले कारबाही गर्ने संकेत गर्नुभयो नि ?
त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं । तर, प्रधानमन्त्री भन्ने पद बोल्ने होइन । त्यो काम गरेर देखाउने पद हो ।
केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो ?
उहाँ बिलकुलै असफल प्रधानमन्त्री हो । हामी सबै मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनायौं । संघीयता हाम्रो लागि पहिलो कार्यान्वयनको चरण हो । यसमा उहाँ असफल हुनुहुन्छ । कसरी असफल भने संघीयता भनेको केन्द्रिकृत राज्य सञ्चालन प्रक्रिया होइन । हिजो जसरी केन्द्रिकृत सरकार थियो । त्यसलाई विकेन्द्रिकृत गर्न संघीयता बनाइएको हो । त्यो अनुसारको काम उहाँहरुले गर्न सक्नुभएको छैन । यो मैले भनेको होइन, अहिलेका जति स्थानीय तहका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद, मन्त्री, स्थानीयतहका नेता कार्यकर्ताले भनेको कुरा हो । यो कुरा उहाँकै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले नै भनिरहेका छन् । ६ वटा प्रदेशमा त उहाँकै पार्टीका मुख्य मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु केन्द्रले हामीलाई अधिकार दिएन भनिरहनुभएको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन । दोस्रो हाउसमा आएका विधेयकहरु पनि विवादमा परेका छन् । हामीले सहमतिबाट बनाएको संविधानलाई बहुमतबाट विधेयक बनाएर नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार हनन् गराउने विधेयक यो सरकारले ल्याएको थियो, त्यो अहिले विवादास्पद भएर बसेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले केही प्रगति गर्न खोजेको देखिन्छ नि ?
शान्तिसुरक्षाको कुरा गर्दा देशैभरि हत्या, बलात्कार, गण्डगर्दी भइरहेको छ । यसमा दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्र लथालिंग भएको छ । व्यापारव्यवसाय चौपट भएको छ । यही अवस्था रहीरहने हो भने अर्को वर्षदेखि सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । महंगी त्यस्तै बढेको छ । ब्यापारघाटा त्यत्तिकै बढेको अवस्था छ । राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन । आर्थिक मन्दीको अवस्था भइरहेको छ । यो सरकार अहिले लाजले गफ पनि गर्न छोडिसकेको छ । बाटोघाटोका कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ । अहिले विगतका सरकारहरुले काम गरेर अन्तिम, अन्तिम पु¥याएको काम पुरा भएर त्यसको उद्घाटन गर्ने काम भएको छ । मेलम्चिको पानी पोहोर दशैंमा आउँछ भनेको होइन ? अहिले त्यसको हालत के छ ? । जुनसुकै योजना, आयोजनाहरु लथालिंग भएको छ । यो सरकारको क्रियाकलापले जनता निरास भएका छन् । हामीले बनाएको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध नै त्यो निराशाको भावना जाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ ।
ठेकेदारको कुरा गर्दा शारदा अधिकारीको पनि थाहा भयो होला नि ?
ठेकेदारमार्पmत हुनुपर्ने कतिपय विकासनिर्माण कामहरु पछिल्लो समय धेरै बिग्रिएका छन् । कतिले त ठोक्का लिएर कामै नगरेको उदाहरणहरु पनि छन् । कतिले बिचैमा काम छोडेर आयोजनाहरु अलपत्र परेका धेरै उदाहरणहरु छन् । यसमा जब राज्यसञ्चालकहरु नै त्यस्ता कुराहरुलाई प्रोत्साहन दिन्छन् । अनि यस्ता घटनाहरु हुन्छन् । ठेक्का दिनेबेलामा तेरो र मेरो, तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भन्ने जुन परिपाटी त्यसैको उपज हो । जहाँसम्म शारदा अधिकारको कुरा छ । घरमा बस्न दियो भन्दैमा ठेक्कै गर्नुपर्दैन । एउटा ठेक्का पुरा नभइकनै अर्को ठेक्का लिन पाइन्छ । यस्तो भएपछि सबै ठेकेदारहरु ठगदार भए । त्यसकारण राजनीतिवृत्तबाट तिनलाई संरक्षण गर्नुभएन । जुनसुकै अपराध होस् । अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण भएपछि यो स्थिति देखिएको हो । अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा घर भाडामा बस्न पाएकोभरमा, बेलुका ह्वीस्की खुवाएको भरमा ढाकछोप गर्न थाल्नुहुन्छ भने देशमा ठगदारहरु बढिहाल्छन् नि ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान गर्न कुटनीतिक पहल कि भातृ संस्थालाई सडकमा उतारेर ?
उच्चस्तरीय कुटनीतिक माध्यमबाट नै यो समस्याको समाधान हुने हो । यो कुरा हामीले सर्वदीय र सर्वपक्षीय बैठकमै भनेका छौं । यसबारे प्रधानमन्त्रीले मुख पनि खोज्नुभएको थिएन । अस्ति बल्लबल्ल मुख खोल्नुभएको छ ‘यो भूमि नेपालको हो’ भनेर । त्यो फेरि बालुवाटारमा युवासंघसँग भनेर मात्रै हुँदैन । यसको समाधानको लागि उच्चस्तरीय कुटनीतिक तरिबाट तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजको आधारमा पहल गर्नुपर्छ । त्यसको लागि चाहिने सहयोग राजनीतिक दलहरुसँग माग्नुपर्छ । सहयोगका लागि सबै दलहरु तयार भएको अवस्था छ । जहासम्म सडकका कुरा छन् त्यसमा जनता आपैm आइरहेका छन् । कुनै पार्टीले ल्याउनुपरेको छैन । आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि उनीहरु स्वस्पूmर्त रुपमा सडकमा आएका हुन् । यसलाई राजनीतिक दलहरुले समर्थन गर्नुपर्छ । File Photo
‘दश बुँदे त उहिल्यैदेखिनै कार्यान्वयन हुँदैछ’ : केशब बडाल (भिडिओसहित)
नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य केशब बडालले हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध
‘हामी माधव नेपालको पार्टीमा जाने कुरा भएको छैन’ : युवराज ज्ञवाली
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आफूहरु माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा नजाने
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानलाई धुजाधुजा पारियोः प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (भिडिओसहित)
काठमाडौं, असोज ३ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सत्ताको छिनाझप्टीमा लागेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको
‘अब अदालतले देश चलाउने दिशातर्फ देश जाँदैछ, यस्तो भयो भने संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ’ : डा. भीमबहादुर रावल
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दश बुँदे सहमति
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली राजनीतिमा अब केपी
प्रतिनिधिसभाका हत्यारालाई बैठकमा आउने नैतिक अधिकार छैन् : वेदुराम भुषाल (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २७ भदौ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का स्थायी कमिटी सदस्य डा. वेदुराम भुषालले मन्त्री